Jaew Sauce ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ဒါကတော့..ထိုင်းလို Jaew လို.ခေါ်တဲ့ဆော့(စ်) ပါ....ဒီဆော့(စ်) ကိုအသားကင်များနဲ.အများဆုံးတွဲဖက်ပါတယ်....။
Shallot လို.ခေါ်တဲ့ကြက်သွန်နီအသေးလှီးပြီး..........၁/၄ ခွက်
နံနံပင်+ရှမ်းနံနံ (ပါးပါးလှီး)..................................၁/၄ ခွက်
ပဒဲကောအခြောက်မှု န်. ....................................ဇွန်းဝက်(ထမင်းစား)
Palm Sugar လို.ခေါ်တဲ့ကြံသကာအနှစ်(သို.) သကြား..၂ ဇွန်း(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း)
ဆန်လှော်မှုန်. ...............................................၁ ဇွန်း(ထမင်းစား)
ငရုတ်သီးအလှော်မှုန်.(သို.) အစိမ်းမှုန်. ................၁ဇွန်း
သကြား(သို.) ကြံသကာ ၊ပဒဲကောအမှုန်. ၊ငံပြာရည် ၊ သံပုရာရည်တို.နှင့်
နောက်ဆုံးမှ..ငရုတ်သီးမှုန်. ၊ ဆန်လှော်မှုန်. ၊ နံနံပင် +ရှမ်းနံနံ ၊ ကြက်သွန်နီ
အရသာကို ချ ဉ်သော ၊ငံသောအရသာဖက်ဦးတည်အောင်လိုတိုးပိုလျှော့ပြု ပြင်ပါ။